ktmkhabar.com - सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले किन गर्‍यो बहिष्कार ?
सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले किन गर्‍यो बहिष्कार ?
काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिस्कार गर्ने भएको छ । आज दिउँसो नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकलाई एमालेले बहिस्कार गर्ने भएको हो ।
ती नेताकाअनुसार सर्वदलीय बैठकमा दलको नेताका हैसियतमा पूर्वएमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहलाई बोलाइएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको हो ।
माधव नेपालसहित कारवाही गरिसकेका १४ जनाले संसदमा वैधानिकता नपाउने जिकिर गर्दै आएको एमालेले उनीहरुलाई उपस्थित गराएको भनेर संसदसमेत अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।